Wholesale Custom Heavy Duty Retractable Imbwa Leash fekitari uye bhizimisi | Kudi
1.Retractable traction tambo yakatambanuka ribhoni tambo. Iyi dhizaini inokutendera kuti utambanudzire tambo mushe mushe, izvo zvinogona kunyatso kudzivirira imbwa leash kubva kumhanyisa uye kuruka. Zvakare, dhizaini iyi inogona kuwedzera nzvimbo inotakura zvine simba patambo, kuita kuti tambo yekusungira iwedzere kuvimbika, uye kumira nesimba rakakura rekudhonza, zvichiita kuti mashandiro ako ave nyore uye zvinokubata iwe kuti uwedzere kugadzikana.
Tumira Kubvunza Taura Izvozvi
Dema uye Ichena kana Tsika
Pasuru / Logo:
Kubatsira kweCustom Heavy Duty Inodzoreka Imbwa Leash
Iyo yakavimbika yekukiya mashini inovimbisa iro ribhoni rinogona kuwedzera uye kudzosera mushe. Dhinda bhatani bhureki kuti urivhure, uye tsvedza bhatani rekiyi kumberi kukiya leash. Kana iwe uchida kudzorera iyo yemahara mamiriro, ingo tsvedza bhatani kumashure. Ingo kuumburuka-uye kumonera-chigunwe chako chete, zviri nyore uye zvakachengeteka.
Mufananidzo weCustom Heavy Duty Inodzoserwa Imbwa Leash
1.Are iwe fekitori kana kutengesa kambani?
Isu tiri fekitori inozivikanwa mukugadzira zvigadzirwa zvemhuka kwemakore makumi maviri.
2.Kuti uite kutumira?
RE: Negungwa kana nendege kune hombe kuraira, kuratidza kuburitsa seDHL, UPS, FEDEX, EMS, TNT yemadhora mashoma ehuwandu.
Kana iwe uine mumiriri wekutumira muChina, tinogona kutumira chigadzirwa kune yako China Agent.
3.What wako kutungamirira nguva?
RE: Zviri mazuva makumi mana zvakajairika.kana isu tine zvigadzirwa zviri mumatanda, ichave angangoita mazuva gumi.
4.Ndinogona here kuwana yemahara sampuro yezvako zvigadzirwa?
RE: ehe, zvakanaka kuti utore yemahara sampuro uye ndokumbira iwe ubhadhare mari yekutumira.
5: Ndeipi nzira yako yekubhadhara?
RE: T / T, L / C, Paypal, Kiredhiti kadhi uye zvichingodaro.
6. Ndeupi rudzi rwehomwe yezvigadzirwa zvako?
RE: Zvakanaka kugadzirisa pepa racho.
7.Can Ndinoshanyira fekitari yako pamberi odha?
RE: Chokwadi, gamuchirai kushanyira fekitori yedu.Ndokumbirawo kuronga musangano pamwe nesu pamberi.
Kutsvaga kubvunza kwako kweiyi Isina Simbi Imbwa Comb
Pashure: Yakawedzera Bungee Inodzoserwa Imbwa Leash
Inoratidzira Mucheka Imbwa Collar
Inogadziriswa Oxford Imbwa Sunga